पृथ्वीनारायणलाई चिन्न नसकेकै कारण हामीले सिके राउत त जन्माइरहेका छैनौं ? (शंकर पोखरेलको विचार) - Dainik Nepal
पृथ्वीनारायणलाई चिन्न नसकेकै कारण हामीले सिके राउत त जन्माइरहेका छैनौं ? (शंकर पोखरेलको विचार)
शंकर पोखरेल २०७४ पुष २७ गते १०:३९
– शंकर पोखरेल
पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नेपाल राष्ट्र निर्माणमा नेपाली जनताको सम्मानको विषय पनि हो ।
इतिहास सरल रेखामा मात्रै अघि बढ्दैन । कुनै वेला समाजमा नायक बनेकाहरु समयको अर्को कालखण्डमा खलनायक पनि सावित हुन्छन् । तर समाजलाई सकारात्मक योगदान दिनेहरु भने लामो समयसम्म गौरवपूर्ण इतिहासको रुपमा समाजमा बाँचिरहन्छन् । पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तारको अभियान पनि नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म जिवन्त भइरहने ऐतिहासिक तथ्य हो । निश्चयनै नेपालको सामन्ती राजतन्त्रले पृथ्वीनारायणका राष्ट्रविस्तारको अभियानलाई राष्ट्रिय एकीकरणका रुपमा विश्लेषण गर्दै त्यसलाई निरंकुश राजतन्त्रको आधार बनाउन नखोजेको होइन । तर त्यसका नाममा आजको एकीकृत नेपाल निर्माणमा उनको योगदानलाई अवमुल्यन गर्ने कुरा उचित होइन ।
निश्चयनै शान्तिप्रकृयामार्फत मुलधारका राजनीतिमा प्रवेश गर्न आइपुगेको नेकपा (माओवादी)ले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने कुरा रोक्न माग गरेको परिप्रेक्षमा संविधानसभावाट संविधान नबन्दासम्म पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने कुरा स्थगित भएको सन्दर्भलाई स्वभाविक मान्न सकिएला । तर संविधानसभावाट बनेको नयाँ संविधानले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको राज्यविस्तार अभियानबाट एकीकृत बन्न पुगेको नेपाललाई एकीकृत र अभिभाज्य राष्ट्रको रुपमा स्थापित गरेको परिप्रेक्षमा उक्त ऐतिहासिकतालाई पुनर्स्थापित गर्नु समयको माग बन्न पुगेको छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र निर्माणको महानायकका रुपमा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई आजको परिप्रेक्षमा विशेष महत्वका साथ मनाउनु आवश्यक छ ।
यद्यपी नेपाल राष्ट्र निर्माणको वस्तुगत आधार नेपाली समाजमा विकसित नभएको भए पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वको विजय अभियान सफल र दिगो समेत हुन सक्ने थिएन । नेपाली समाजका बलियो एकीकृत राज्य निर्माणको आधार तयार भएका कारणले नै पृथ्वीनारायणको निधनपछि पनि उनका उत्तराधिकारीहरुले एकीकरणको अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेका थिए । भारतीय उपमहाद्विपमा बिट्रिस सामाज्यको बिस्तार नभएको भए नेपाल राज्यविस्तारको अभियान यो भन्दा अझै विस्तारित स्वरुपमा रहने थियो । पूर्वमा टिष्टा र पश्चिमा काँकडासम्म त नेपाली विजय अभियान विस्तारित भएकै थियो । तर, बिट्रिस साम्राज्यको अवरोधका कारणले नेपालको राज्य विस्तार अभियान खुम्चन पुगेको थियो । बिट्रिस साम्राज्यसँग लडेर आफ्नो भूमिको रक्षाको आधारभूमि तयार पारेका वीर नेपालीहरुले पछि बिट्रिस साम्राज्यसँगको मित्रता र सहयोगका माध्यमबाट आफ्नो सम्प्रभूताको रक्षा गर्न सफल भएका थिए । यस अभियानमा पृथ्वीनारायण शाह प्रमुख अभियानकर्ता रहेको भए पनि कयौँ बीर योद्धाहरु र लाखौलाख नेपाली जनताका साथ र सहयोग रहेको थियो । यस अर्थमा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नेपाल राष्ट्र निर्माणमा नेपाली जनताको सम्मानको विषय पनि हो ।
कतै हामीले इतिहासबाट सिक्न नसकेका कारणले नै यतिबेला हामीले हाम्रो समाजमा सीके राउत प्रवृत्तिलाई जन्मने मौका दिन पुगेका त छैनौ ?
यद्यपी राज्य विस्तारको अभियानमा भएको हिंसालाई आधार वनाएर कतिपयले यसलाई एकता दिवस मान्न सकिँदैन पनि भन्ने गरेका छन् । निश्चयनै सामन्ती समाजमा राज्यविस्तारको अभियानमा हिंसाको प्रयोग हुनु अस्वभाविक विषय होइन । आजको आधुनिक समयमा त राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा हिजोका सामन्ती राजाले राज्यविस्तारका क्रममा भएका युद्धका क्रममा कुनै प्रतिसोध नै लिएनन् होला भनेर अनुमान गर्न सकिदैन । तर नेपालको राज्यविस्तार अभियान दुनियाँका राज्य निर्माणको अभियानको तुलनामा सहज युद्ध थियो भन्ने कुरा त्यसले सफलता प्राप्त गर्नका लागि लिएको समयवाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय राज्यहरु एकीकरणको अभियानमा समावेश हुने प्रक्रियामा खासै युद्ध समेत नभएको सन्दर्भ पनि इतिहासमा उल्लेख छ । एकीकरण अभियानमा समावेश भएका राजा र उनका सन्तानहरुले निकै पछिसम्म पनि राजकीय सम्मान पाउँदै आएका सन्दर्भले पनि त्यतिवेलाको युद्धको चरित्रलाई बझ्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैले पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तार अभियानलाई जातिय दमन र उत्पीडनको इतिहासको रुपमा चित्रण गर्ने कुरा पनि त्यसपछिका दिनका शासकीय अभ्यासबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
यतिबेला नेपालको संविधानले वर्तमान नेपालको भूखण्डको अखण्डताको कुरा गरेको परिप्रेक्षमा यसका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नु आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासप्रतिको सम्मान हो । इतिहासको यस सन्दर्भको तथ्यका वारेमा वुझ्नका लागि रुशी दार्शनिकको भनाई निकै मननीय छ । उनले भनेका छन् ‘इतिहासले कसैका लागि सिक्न बाध्य गर्दैन, तर इतिहासवाट सिक्न नसक्नेहरुलाई सजाय मात्र दिन्छ ।’ कतै हामीले इतिहासबाट सिक्न नसकेका कारणले नै यतिबेला हामीले हाम्रो समाजमा सीके राउत प्रवृत्तिलाई जन्मने मौका दिन पुगेका त छैनौ ? गम्भीर भएर सौचौ र पृथ्वीनारायण शाहलाई महत्वाकांक्षी सामन्ती राजाका रुपमा मात्र नहेर आजको आधुनिक नेपालको भौगोलिक जग निर्माण गर्ने निर्माताका रुपमा समेत सम्मान गरौँ । संघियतामार्फत बलियो र एकतावद्ध आधुनिक राष्ट्र निर्माणको लागि पनि यस प्रकारको दृष्टिकोणले नै सकारात्मक योगदान दिनेछ । त्यसैले पौष २७ को पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस सोही उद्येश्य अनुरुप पुनस्थापित गरौँ ।
(समय सान्दर्भिक भएका कारण यो लेखकलाई पुनः प्रकाशित गरिएको छ- सम्पादक)